go'yaal looxa midab leh Soo-saareyaasha & Alaab-qeybiyeyaasha - Shiinaha midabkeedu yahay acrylic midabkeedu yahay Warshad
midabka xaashida looxa
1) Isgaarsiinta sare ilaa 93%;
2) Miisaan khafiif ah: in ka yar nus ka culus culeyska galaaska;
3) U adkaysiga cimilada ee ka soo horjeedka midab beddelka iyo isbedelka
4mm xaashida acrylic ee jikada
Xaashida looxa loo yaqaan 'Acrylic sheet' waa mid qafiif ah, oo kala jajaban kuleylka kuleylka leh. Maaddadu waxay ku habboon tahay noocyo badan oo codsiyo ah sida kiisaska muuqaalka, qaabeynta sawirka, barta bandhigga iibsiga, alaabta guriga, calaamadaha, qaybaha u gaarka ah iyo waxyaabo kaloo badan.
warqad akrilik iridescent
Waraaqaha looxa waxaa lagu bixin karaa Clear, Black, White, Gray, Bronze, Blue, Red, Yellow, Green and more. Way jari kartaa laser.
madow warqad looxa
Xaashida loo yaqaan 'Black Cast Acrylic Sheet' waa shay madow oo balaastig ah oo leh awood muuqata, qallafsanaan, iyo caddayn muuqaal ah. Xaashida looxa waxay soo bandhigtaa sifooyin u eg muraayad — hufnaan, hufnaan, iyo hufnaan - laakiin kala badh culeyska iyo marar badan saamaynta iska caabinta muraayadaha.
Go'yaal akrilik midab leh Aragti ahaan, midab kasta ayaa la samayn karaa. Midabada xaashida ah ee loo yaqaan 'acrylic sheet' ee suuqa ku yaal ayaa loo qaybiyaa laba nooc: xaashida acrylic-ka hufan iyo xaashida acrylic color. Xaashida acrylic saafi ah waxaa kujira xaashi hufan oo saafi ah iyo xaashi acrylic ah oo qabow;